🥇 ▷ Codsiyada ugu fiican ee soo kabashada xogta macOS iyo macruufka ✅
Codsiyada ugu fiican ee soo kabashada xogta macOS iyo macruufka
Lumitaanka xogta ku kaydsan Mac-ka ama meelaha kale ee dibedda laga isticmaalo waa had iyo jeer wax aan fiicnayn. Mararka qaar waxay u dhacdaa daal la’aanta jirka awgeed wax yar ayeynu ka qaban karnaa dib u soo kabashada. Waqtiyada kale sida caadiga ah waa tirtir ikhtiyaari ah oo aan wax ku qaban karno, ama ugu yaraan aan isku dayno. Haddii aad si qalad ah u tirtirto feylka halkan ayey aadaan qalabka ugufiican ee soo kabashada xogta gudaha macOS.
Soo kabashada xogta ee macOS
Qaar badan oo ka mid ah codsiyada aan isticmaalno maalin kasta waxay bilaabeen inay ka faa’iideystaan ​​faa’iidooyinka kaydinta daruuraha. Laba ka mid ah kuwa ugu muhiimsan ayaa ah amniga weyn iyo ikhtiyaarka dib loogu soo celin karo iyada oo aan la adeegsan barnaamijyada xisbiga saddexaad. Sababtoo ah sida caadiga ah inkasta oo ay tirtireyso, waxay caadiyan sii joogaan 30 maalmood ilaa laga gaarayo ciribtirka ugu dambeeya.
Laakiin marka aynaan haysanin xulashooyinkaas oo kale, xaaladda ah in la tirtiro ama la dejiyo wado wadis ah si qalad ah, waxaan marwalba u heli karnaa codsiyada soo kabashada xogta. Intii lagu jiray sannadahan oo dhan waan awoodnay oo waxaan u baahnaa inaan dhowr isku dayo. Kuwa soo socdaa waa kuwa ii soo bandhigay natiijooyinka ugu wanaagsan.
Codsiyadaan waxaad isku dayi kartaa inaad soo ceshato xogtaas qiimaha leh ee laga tirtiray Mac-gaaga
Kahor intaadan xasuusin haddii aad tirtirtay fayl ama aad u sameysay qaab wadis ah waa muhiim inaadan qorin wax xog ah. Haddii aan sidaas yeelno, fursadaha soo kabashada way yaraaneysaa, in kastoo aan sidaa yeelin dammaanad qaad 100% guusha.
Soo kabashada Mac Mac Waa codsi ay soo saartay Stellar kaasoo awood u leh inuu soo ceshado dukumiintiyada, sawirrada, muusikada ama fiidiyowyada oo ay ku jiraan qeybaha HFS +, FAT, ExFat iyo nidaamyada faylka NTFS.
Tani waa codsigii aan adeegsaday marar badan. Waxay kuxirantahay cutubka iyo awoodeeda, falanqeynta ayaa noqon doonta mid gaabis ah ama gaabin doonta laakiin samir leh heerka guusha ayaa aad u sareeya. Soo kabsashada sawirrada Waxaan helay natiijooyin wanaagsan, anigoo awood u leh xitaa helitaanka faylalka RAW. Laakiin iska ilow in uusan ballan qaadayn waxqabadka 100%, maxaa yeelay mararka qaar feylasha ayaa ka soo kaban doona musuqmaasuqa ama si toos ah looma heli doono.
Soo dejiso | Soo Celinta Xogta Mac ($ 99)
Ku saabsan Disk Drill 3 waxaan horeyba uga wada hadalnay halkan Applesfera. Codsigan oo ay weheliso dhowr ikhtiyaar oo dheeraad ah, qaar ayaa laga heli karaa nooca bilaashka ah iyo kuwa kale oo keliya iyada oo loo marayo ikhtiyaarka lacag bixinta (€ 89) sida soo kabashada xogta, waxay noo oggolaaneysaa inaan soo kabsanno faylasha la tirtiray. Dhamaan iyada oo loo marayo interface user aad u fudud.
In kasta oo haddii xulashooyinka dheeriga ah aysan adiga xiiseyneynin, waad leedahay Soo kabashada Disk Media Kaliya wuxuu ku kacayaa € 43,9 oo loogu talagalay Mac App Store.
Soo dejiso | Soo kabashada Disk Media
Samatabbixinta Xogta 5
Samatabbixinta Xogta ayaa ah codsi kale oo caan ah oo loogu talagalay soo kabashada xogta. Waxa loo heli karaa labadaba Mac iyo Windows Khibradeyda iyada layar way yar tahay laakiin baaritaanada qaar ayaa la sameeyay natiijooyinku waxay ahaayeen kuwa qanacsan.
Iyada oo leh ikhtiyaarro dheeri ah sida isku-dhafka duubista ama abuurista wadista soo-kabashada, Xog-ururinta ayaa ah beddel kale oo lagu tixgeliyo haddii aad ubaahantahay soo kabashada feylasha la tirtiray.
Soo dejiso | Samatabbixinta Xogta 5 (€ 99)
Soo-kabashada Xogta WonderShare
Soo kabashada xogta Waa kan ugu dambeeya ee loogu talagalay tasiilaadka loogu talagalay soo kabashada feylasha la tirtiray. Halkaan waxaan ku haynaa moodalka lacag bixinta, qiimaha loogu talagalay casriyeynta cimrigu waa $ 89.95. Waxaan sidoo kale leenahay nooc tijaabin ah oo aan ku eegno haddii ay awoodi karto in la helo faylalkaas na xiiseeya. Hadday natiijadu tahay mid toganna markaa bixi lacag si aad u furato shaqooyinka oo aad u awoodo inaad keydiso xogta meel cusub.
Soo dejiso | Soo kabashada Wondershare
Gunno dheeri ah: ka soo kabso faylasha tirtiray iPhone ama iPad
Si la mid ah sida ula macOS, codsiyada macruufka iyo adeegsiga adeegyada daruuraha ayaa fududeynaya soo kabashada xogta. Laakiin haddii sabab uun aan u tirtiro qaar ka mid ah macluumaadka, gaar ahaan sawirrada, ee kaydinta aaladda ee degmada waxaa jira sidoo kale barnaamijyo isku deyi doona inay naga caawiyaan sidii aan uga soo kabsan lahayn.
Barnaamijyadan waxaan sidoo kale uga soo kaban karnaa xogta ku keydsan gudaha gudaha aaladaha iOS
Iyadoo aan lahayn waayo-aragnimo badan baahida jirta awgeed, labada dalab ee loogu talo galay inay isku dayaan dib u soo ceshano faylasha tirtiray macruufka waa:
Qalliinka labadoodaba aad ayuu lamid yahay haddii aan la isku mid ahayn. Waxaa lagu rakibay on our Mac ama PC Windows, aaladaha ku xiro USB galay kombiyuutarka oo tag. Iyadoo la raacayo astaamaha istiraatiijiyadeeda waxaan arki karnaa dhammaan xulashooyinka soo kabashada ee ay bixiso. Kaas oo dhaafsiiya sawirada sidoo kale u adeegaya sidii loo soo heli lahaa farriimo ama xog kale.
Waxaan rajeynayaa inay adiga waxtar kuu tahay dhammaantiina waa macluumaad iyo wixii shaki ah, soo-jeedin ama waaya-aragnimo ah oo aad ku soo qaadatay mowduucan aad horey u ogtahay inaad ku wadaagi karto faallooyinka. Marka waxaan dhammaanteen sii wadan karnaa barashada ku saabsan macruufka, macOS iyo aaladda Apple.
Gudaha Applesfera | Midkood Apple ama qofna kaa caawin maayo inaad ka soo kabato xogta MacBook Pro-ka cusub haddii motherboard-ka uu guuldareysto